प्रारम्भिक अन्तिम पूर्वावलोकन, मेलबोर्न भिक्सेन्स बनाम जायन्ट्स, भविष्यवाणी, विश्लेषण, किरा अस्टिन, कसरी हेर्ने – ENEWSTECH
प्रारम्भिक अन्तिम पूर्वावलोकन, मेलबोर्न भिक्सेन्स बनाम जायन्ट्स, भविष्यवाणी, विश्लेषण, किरा अस्टिन, कसरी हेर्ने
तिनीहरूको नामहरू जस्तै, मेलबोर्न भिक्सेन्सहरू सिजन 2022 मा शिकारीहरू भएका छन् – प्रत्येक विपक्षीलाई पिट्दै – तर गत सप्ताहन्तमा सेमीमा ज्वरोले अपमानित भएपछि, घाइते माइनर प्रिमियरहरू शनिबार राति जाइन्ट्स विरुद्धको प्रारम्भिक खेलमा शिकार हुनेछन्।
चोटका कारण सुपरस्टार मिडकोर्टर लिज वाटसनलाई हराएपछि २०२० मा प्रिमियरबाट काठको चम्मचमा गएको सिमोन म्याककिनिसको पक्ष, स्वास्थ्य र सुरक्षा प्रोटोकल अन्तर्गत शूटर किएरा अस्टिन सुरु नगरी हुनेछ, जबकि जायन्ट्स, जसले उत्साही कलिङवुडलाई माइनरमा हराए। सेमिफाइनल खेलमा स्थान बुक गर्न, पूर्ण बलमा हुनुपर्छ।
जोन केन एरिना भिडन्तको विजेता जुलाई3मा पर्थको आरएसी एरिनामा हुने वेस्ट कोस्ट फिभर विरुद्धको ग्रान्ड फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ।
सनकर्प सुपर नेटबल प्रारम्भिक फाइनलमा Vixens vs GIANTS लाईभ र कायो फ्रीबिजको ​​साथ 7PM AEST शनिबार 25 जुन देखि नि:शुल्क हेर्नुहोस्। अब कायो फ्रीबिजमा सामेल हुनुहोस्, कुनै क्रेडिट कार्ड आवश्यक छैन >
भिक्सेन्सले 2022 मा दुई पटक जाइन्ट्सलाई घरेलु मैदानमा तीन राउन्डमा १२ गोलले र सिड्नीमा राउन्ड नौमा अतिरिक्त समयमा तीन गोलले हराएको थियो। तर अष्ट्रेलियाली डायमन्ड्स लिजेन्ड, फक्स नेटबल कमेन्टेटर र पूर्व जायन्ट किम ग्रीनका अनुसार, यसको मतलब जुली फिट्जगेराल्डको पक्षलाई थोरै हुनेछ, जसले अन्तिम छ खेलहरू मध्ये पाँच जितेको छ।
“जायन्टहरू भिक्सेनसँग डराउँदैनन्, यद्यपि उनीहरूले ती हानिहरू भोगेका छन्। तिनीहरूका लागि (फाइनलको माध्यमबाट लामो बाटो आउँदैछ), उनीहरूलाई थाहा छ दबाब सबै भिक्सेन्समा छ। यो खेल्ने अर्को मौका हो, यसलाई त्यहाँ राख्नको लागि, “ग्रीनले भने।
भिक्सेन्सले टप फिनिसिङ गरेपछि सिधा सेटमा बाहिरिने सम्भावना महसुस गर्नेछ, उनले थपे।
“तिनीहरू सबैभन्दा राम्रो तेलले भरिएको, राम्रोसँग संरचित पक्ष हुन्। तिनीहरूले आफ्नो खेल योजनालाई T मा प्राप्त गर्छन् र जब तिनीहरूले यसलाई नेल गर्छन्, जुन समयको 99% हो, तिनीहरूले जित्छन् र हामीले यो सिजन देखेका छौं।
“तर यो समयको अन्य 1% हो, जहाँ यसले काम गर्दैन र तिनीहरू शेल छक्क परे। यो वर्षमा एक वा दुई पटक मात्र हुन सक्छ, तर जब यो हुन्छ, तिनीहरू हराउँछन्। के यो लगातार दुई हप्ता हुनेछ? थाहा पाउन गाह्रो छ। मलाई लाग्छ कि तिनीहरू धेरै उत्कृष्ट छन्,” ग्रीनले भने।
“मलाई लाग्दैन कि हामी निश्चित रूपमा एक प्रहार देख्नेछौं; यो सिधै तल तारमा जान्छ।”
Kiera अस्टिन प्रिलिमको लागि उपस्थित हुने छैनन्। (डैनियल पकेट/गेटी इमेज द्वारा फोटो)स्रोत: गेटी छविहरू
मेलबर्न भिक्सेन्स (१) विरुद्ध जायन्ट्स (३)
शनिबार,7बजे AEST
जोन केन एरेना, मेलबर्न
अम्पायर: जेम्मा कुक र तारा वार्नर
अन्तिम पटक भेट भएको थियो
Vixens 66 ले जायन्ट्स 63 लाई हरायो, राउन्ड 9
मेल अप त्यो महत्त्वपूर्ण छ
जायन्ट्सका फ्रन्टलाइन डिफेन्डरहरू, गोल डिफेन्समा अप्रिल ब्रान्डले र विंग डिफेन्समा एमी पारमेन्टर, भिक्सेन्सको गोल आक्रमण रहनी सामसनको ठाउँमा “क्र्याकिंग म्याच” हुनु आवश्यक छ, अस्टिनको स्थानमा, र सुन्तलामा महिलाहरूको लागि पङ्क्ति आक्रमण लिज वाट्सन। ग्रान्ड फाइनलमा, ग्रीनले भने।
“गत सप्ताहन्तमा प्रमुख सेमिफाइनलमा, वेस्ट कोस्ट ज्वरोले वाट्सनलाई वास्तवमै बन्द गर्न सक्षम भयो र मलाई लाग्छ यदि ब्रान्डले र पार्मेन्टरले त्यसै गर्न सक्छन् र केही बल जित्न सक्छन्, किनकि उनीहरूले पाईस विरुद्धको सेमिफाइनलमा पर्याप्त पाएनन्, यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ, “उनले भनिन्।
ग्रीनले वर्णन गरे कि फिभर कोच ड्यान रायनको योजना “पूरै मध्य च्यानल बन्द गर्ने ताकि भिक्सेन्सका आक्रमणकारीहरूले “त्यस ठाउँमा खेल्न सकेनन्” पूर्णतामा काम गर्यो।
अम्पायरहरूलाई कल गर्न वा नगर्न बाध्य पार्ने “बल चाँडै जाने स्पष्ट नियत” ले पनि फिभरको लागि काम गर्यो।
“Vixens ले बल माथि मात्रै फ्याँक्दैन, त्यसैले जायन्ट्स डिफेन्डरहरूले आफ्नै केही जित्नुपर्छ,” ग्रीनले भने।
“टिली म्याकडोनेलले Mwai Kumwenda सँग आफ्नो हात भरिपूर्ण छ – जसले गत हप्ता 100% मा गोली हान्यो, नबिर्सौं – त्यसैले उनको अगाडि के हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। उनीहरूलाई आवश्यक पर्दा अवरोध प्राप्त गर्न म्याडी हेजस्तो व्यक्तिमा भर पर्न सक्दैन।
दिग्गजहरूले माइनर सेमीमा म्याग्पीहरू तल ल्याए | ०१:४३
ग्रीनले प्रारम्भिकमा आफ्नो एक्स-फ्याक्टरको रूपमा सम्बन्धित प्रशिक्षक म्याककिनिस र फिट्जगेराल्डलाई उद्धृत गरे।
“उनीहरू दुई धेरै स्मार्ट प्रशिक्षक हुन् जसले खेललाई अलग गर्न सक्छन्। को उत्कृष्ट खेल योजना संग बाहिर आउन गइरहेको छ? म जान्न चाहन्छु,’ उनले भनिन् ।
“जबकि टोली र खेलाडीहरूले फाइनललाई ‘अर्को खेल’ भन्न मन पराउँछन्, तिनीहरू होइनन्, फाइनल फरक खेल हो। हामीले देखेका छौं जे पनि हुन सक्छ तर प्रशिक्षकहरूले अझै पनि कथालाई धेरै नियन्त्रण गर्न सक्छन् यदि उनीहरूले आफ्नो गृहकार्य गरे,” ग्रीनले भने, जसले 2008 र 2015 बीच अष्ट्रेलियाका लागि 74 टेस्ट खेले।
“सबैले आफ्नो भिडियो विश्लेषण गर्छन् र म पक्का छु कि सिमोन (म्याककिनिस) ले सेमीमा ज्वरोको बिरूद्ध के भयो भनेर बुझ्नेछिन्, तर के उसले एक हप्तामा यो फेरि नदोहोरियोस भनेर एक रणनीति बनाउन सक्छ? र के दिग्गजहरूले ज्वरोले गर्न सक्ने कुराबाट सिक्न सक्छन्?”
उनीहरूका खेलाडीहरू जस्तै, दुई अनुभवी प्रशिक्षकहरूले दबाबमा प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ, ग्रीनले भने। “मेरो लागि सबै भन्दा राम्रो खेल योजना खेल दिन जीत आउँछ।”
फायरबर्डहरू हेड कोचसँग पार्ट वे | ००:२९
पूर्व सुपर नेटबल तथ्याङ्क विश्लेषक अब क्लच रेडियो कमेन्टेटर माइकल हचिन्सनले भने कि फाइनलको अनुभवका लागि पक्षहरू समान रूपमा मिल्दोजुल्दो छन्, जायन्ट्सले 41 खेलहरू र भिक्सेन्स 40, अस्टिनको फिर्ता लिएर घमण्ड गरेका छन्। Giants को एक अलि राम्रो जीत रेकर्ड छ।
अन्तिम पटक फाइनल खेलेका पक्षहरू 2017 को प्रारम्भिक फाइनल थियो, जुन जाइन्ट्सले 65-57 ले सजिलै जित्यो।
“जब दुई टोलीहरू अहिले धेरै फरक देखिन्छन्, तिनीहरू दुवैले त्यस समयका केही खेलाडीहरूलाई राखेका छन्। भिक्सेन्सका लागि कुमवेन्डा, वाटसन, केट मोलोनी, जो वेस्टन र एम म्यानिक्स र जायन्ट्सका लागि यो जो हार्टेन र जेमी-ली प्राइस हुन्; सबै प्रमुख खेलाडीहरू, “हचिन्सनले भने।
अस्टिन – जसले यस सिजनमा आफ्नो पुरानो पक्ष जायन्ट्स विरुद्ध लगभग 80% सटीकतामा गोली हानेको छ – पनि एक प्रमुख खेलाडी हुने थियो, तर भिक्सेन्सले बिहीबार दिउँसो घोषणा गर्‍यो कि उनले स्वास्थ्य र सुरक्षा प्रोटोकलहरू अन्तर्गत खेल गुमाउनेछिन्, टोली सदस्य रुबी बार्कमेयरको स्थानमा। ।
“बार्कमेयरले गत सिजन 11 खेलहरू खेले, 60% सटीकतामा 35/58 शूट गर्दै, 5/13 सुपर शटहरू सहित, 38% सटीकता दरमा,” हचिन्सनले भने।
उनले मेलबर्नमा प्रि-सिजन टिम गर्ल्स कपमा प्रत्येक भिक्सेन्स खेलमा पनि खेलिन्। “कुल 160 मिनेटमा, उनले 24/28 86% मा, 4/11 मा 36% मा सुपर शट र 10/11 वेस्ट कोस्ट ज्वरो विरुद्ध फाइनलमा, समासनसँग शूटरमा जोडी,” उनले भने।
“यो खेल कसरी जान्छ भनेर भविष्यवाणी गर्न साँच्चै गाह्रो छ। सुपर शट जायन्ट्सका लागि कुञ्जी हुनेछ र पक्कै पनि जो हार्टेन, जो Pies विरुद्ध शानदार थिए। उनी त्यस्तो खेलाडी हुन् जससँग दुईवटा मात्र होइन, पङ्क्तिमा 10 वटा महाकाव्य प्रदर्शनहरू छन्। म दिग्गजहरूलाई समर्थन गर्दैछु। – किम ग्रीन
अफगानिस्तान भूकम्प: तस्बिरमा विध्वंसको चित्रण
नेदरल्याण्ड्स बनाम इङ्गल्याण्ड: जोस बटलरले नेदरल्याण्ड्स विरुद्ध एकदिवसीय शृंखला स्वीप पछि इङ्गल्याण्डको टोलीमा “ठूलो गहिराई” को प्रशंसा गरे